Awunguye Fortune 500 | Martech Zone
NgeCawa, ngo-Epreli 22, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
URoger Yu wase-USA Namhlanje ubhale nje inqaku kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwi iinkampani zishiya ukubhloga:
Ngokuvela kwamajelo eendaba ezentlalo, iinkampani ezininzi zithatha indawo yeeblogi ngezixhobo ze-nimbler ezifuna ixesha elincinci kunye nezixhobo, ezinje ngeFacebook, iTumblr kunye neTwitter.
Inqaku elipheleleyo lilungelelene ngokufanelekileyo ... kodwa idatha inokuba ingachazanga yonke imibutho. Okokuqala, idatha ekubhekiswa kuyo ivela kwiinkampani ezikhula ngokukhawuleza zeFortune 500. Eli libali lakudala lokuqhambuka kuthelekiswa nolungelelwaniso. Ngaba iinkampani zishiya ukubhloga kuba Isicwangciso asibancedisi ukuba bakhule okanye bayashiya ukubhloga kuba bekhula?
Kusekho iinkampani ezininzi ezinkulu ezipapasha kumnandi Iibhloko zebumbano. Kwaye andilulo uhlobo lomntu onokuthi ukubhloga sisicwangciso esifanelekileyo kuwo onke amashishini. Ukuba unophawu olumnandi, lulandelayo kwaye uyinkampani ekhulayo, enenzuzo… ungagqitha kulawulo lwebhlog. Oko akutsho ukuba amaqhinga inkampani yakho ayisebenzisayo ayifikeleleki njengebhlogi yokubumbana… usenokuchitha ixesha kunye nemali kolunye urhwebo kunye namandla obudlelwane noluntu kunokuba ucinga.
Kodwa awuyiyo enye yeenkampani ezikhula ngokukhawuleza kwi-Fortune 500, akunjalo? Ngaba inkampani yakho kuzwelonke okanye kwilizwe jikelele? Ngaba ubonwa njengenkokeli yokucinga kwishishini lakho? Ngaba uyibhanti ethembekileyo negunyazisiweyo emanyelwa lishishini? Ngaba ulawula iziphumo zophando? Ngaba unayo ibhajethi yentengiso nenkululeko yokwakha eso sicwangciso usebenzisa ezinye iindlela?
Ukunikezelwa kwezixhobo, andizukubhloga kwinkampani yam, nokuba. Ndingatyala imali ngakumbi kubudlelwane boluntu, inkxaso-mali, intengiso kunye nokunyanzela ukuthetha kwimisitho kwilizwe liphela. Kodwa bubunewunewu endingenako ukubufikelela. Ukubhloga kusebenza kakuhle kum kuba ndingatyala ixesha namandla… zombini izibonelelo ezibizayo kodwa ezo ndihlala ndizifumana ukukhulisa ishishini lam.
Ukuxhalaba kwam ngenqaku kukuba, ekuboneni kokuqala, iinkampani zinokujonga eli nqaku kwaye zifumanise ukuba sisizathu esikhulu sokujonga ukubhloga njengecebo elinokwenzeka. Isigqibo sokutyala imali kwisicwangciso sokubloga sinzima ngakumbi kunokujonga nje oko kwenziwa yiFortune 500. Ukubhloga is utyalomali lwexesha elide olufuna ukuzinikela, izixhobo kunye nesicwangciso-qhinga sokwenza ukuba isebenze kakuhle.
Ndiyakholelwa ngokwam ukuba iinkampani ezininzi ziyabheyile kubhloga kuba ayiboneleli ngeziphumo ezikhawulezayo ezifunwa ziinkampani ezinkulu. Kuhlala kulula ukuhlawula ukuthenga ingqalelo ukuze ufumane ingqalelo… umbuzo awusebenzi, ngumcimbi wokuba uza kuthatha ixesha elingakanani, kangakanani kwaye kutheni ungafaka isicwangciso esinye ngaphezulu kwesinye.
Elinye inqaku, ayothusi nakum into yokuba amajelo eendaba aphambili aneentatheli ezinobungcali, abahleli kunye nabapapashi baya kubhala malunga nezinto ezingalunganga zokubhloga. Thetha nje!
tags: kublogakubloga kwequmrhuithamsanqa 500ithamsanqa